Misiyano pakati paWindows neHofisi Nei vasina kufanana? | Windows News
Misiyano pakati peWindows neHofisi Sei zvisina kufanana?
Ignatius Room | | Guides uye matipi, Windows 10
Vazhinji ndivo vashandisi vanofunga izvozvo Windows neHofisi zvakafanana. Dai vaive vakafanana vaingozivikanwa nezita rimwe chete. Kana usiri kunyatso kujekesa nezve musiyano uripo pakati peWindows neHofisi, ndinokukoka kuti uenderere mberi nekuverenga.
Windows iri a operating system, seAndroid, macOS (iyo inoshanda sisitimu yemakomputa eMac, iOS (iyo inoshanda sisitimu yePhones)… Nepo Hofisi iri application suite iyo inoshanda paWindows, Android, iOS, macOS ...
1 chii mahwindo
1.1 Windows shanduro
1.1.1 Musha weWindows
1.1.5 Windows 11 Pro yeWorkstation
2 Chii chinonzi Office 365
2.1 Zvishandiso zvinosanganisirwa muHofisi
2.1.10 Kuchengetedzwa kwemwana
2.1.15 Simba Rongedza
2.2 Microsoft 365 shanduro
2.2.1 Microsoft 365 Yemunhu
2.2.2 Microsoft 365 Mhuri
2.2.3 Zvirongwa zvebhizinesi:
Windows ndiyo inoshanda sisitimu yeMicrosoft. Iyo yekushandisa system inotitendera shandisa chikamu chimwe nechimwe vari chikamu chechikwata.
Inoshanda system vanoda maapplication kuitira kuti uwane zvakanyanya kubva pazviri. Tinogona kutaura kuti sisitimu yekushandisa ndiyo hwaro painoiswa maapplication.
Zvikumbiro zvinofanira kuva yakagadzirirwa kushanda neiyo chaiyo yekushandisa system uye, zvakare nemavakirwo, ingave x86, ARM…
Muenzaniso wakajeka unowanikwa pakuti hazviiti isa Windows paMac ine M1 processor. Apple's M1 range of processors, shandisa ARM architecture, nepo Windows yakagadzirirwa chete kushanda pamakomputa ane x86 architecture (Intel uye AMD processors).
Sezvandataura pamusoro, sisitimu yekushandisa inoda maapplication, kuve hwaro hwekuchengetedza yakagadzikana uye inoshanda ecosystem kuitira kuti, nguva imwe neimwe, inogamuchirwa nevashandisi vakawanda.
Microsoft haingope shanduro imwe chete yeWindows, asi neshanduro itsva yega yega (yatiri parizvino Windows 11), inoburitsa seti yemhando dzakasiyana dzakanangana nevashandisi. Vashandisi vepamba, nharaunda dzedzidzo, nyanzvi yenyanzvi, makambani makuru...
Iyo Imba vhezheni ye Windows 11 ndiyo shanduro yekutanga iyo inovhara zvese zvinodiwa nevashandisi vepachivande, kusanganisira iyo Parental Control system yekutarisira mhuri maakaundi.
Iyo Pro vhezheni ye Windows 11, yakafanana neiyo Windows 10, inotipa nhevedzano ye zvinhu zvakagadzirirwa nzvimbo dzebhizinesi, mabasa asiri kuwanikwa muHome vhezheni uye kuti hapana nzira yekuamisa.
Pakati pemabasa anowanikwa muPro vhezheni asipo muImba vhezheni, tinowana:
Batanidza kumakombuta uri kure. Nekuda kwebasa iri, tinokwanisa kubatana kune chero imwe komputa inotungamirwa neWindows (mune chero shanduro yayo) uye kuibata pasina kushandisa maapplication akaita seTeamviewer.
Windows Server kubata nekutonga seti yemakomputa, maakaundi evashandisi, mapoka evashandisi, mafaera, maprinta, maperipherals...
Zvigadziriso zvebhizinesi. Iyo nzira yekugovera yeWindows Pro yeBusiness updates inoshanda zvakasiyana kubva kuHome vhezheni, sezvo ivo vanogara vari vekutanga kugamuchira zvigamba zvematambudziko ekuchengetedza izvo zvinogona kuisa kuvimbika kwebhizinesi panjodzi.
Windows Information Protection. Ichi chimiro chakagadzirirwa kudzivirira vashandi kubva kunotora zvinyorwa zvekambani zvakakosha.
Iyi vhezheni inoitirwa dzidzo uye inosanganisira ese maPro maficha zvisinei, vazhinji vakaremara. Nekudaro, kusiyana neiyo Kumba vhezheni, iyo Pro Dzidzo vhezheni inogona kuvhurwa sezvinodiwa.
Iyo vhezheni ye makuru makambani ndizvo Windows 11 Enterprise. Iyi vhezheni ine ese maficha e Windows 11 Pro pamwe nemamwe maficha ane chinangwa chekutonga nhamba huru yemakomputa.
Windows 11 Pro yeWorkstation
Microsoft inopawo a vhezheni vhezheni, vhezheni iyo, kunyange isingashandiswe zvakanyanya (neGNU/Linux iri iyo sarudzo inosarudzika), ine hwaro hwakakura kwazvo hwevatengi vanoda maficha eWindows kuti akwanise kushanda, maficha ayo GNU/Linux anotipa.
Idzi ndidzo shanduro dzakafanana dze Windows 10 dzakaburitswa, uye dzataizofanira kuwedzera Windows 10 Nharembozha, Microsoft's operating system yenharembozha yakamanikidzwa kusiya nekuda kwekushaya budiriro.
Chii chinonzi Office 365
Kana tave pachena kuti iWindows uye ese mavhezheni aripo pamusika, nguva yasvika yekuziva chii chinonzi Hofisi / Hofisi 365.
Office ndiyo seti yezvikumbiro, zvakare kubva kuMicrosoft, iyo yatinogona kugadzira chero rudzi rwegwaro, kubva kuspredishiti kusvika kune dhatabhesi, kupfuura nemagwaro ezvinyorwa, mharidzo, kutonga uye kugovera manotsi, maneja tsamba...
Mumwe mutsauko watinowana pakati peHofisi neWindows ndewekuti nepo Windows ichigona kutengwa nemutengo mumwe chete zvichienderana neshanduro yayo, Hofisi inongowanikwa pasi pekunyoreswa.
Zvishandiso zvinosanganisirwa muHofisi
ari mapurogiramu anosanganisirwa muMicrosoft 365 (yaimbozivikanwa seHofisi uye Hofisi 365) ndeiyi:
Gadzira, gadzirisa, uye ugovane maapuro dhatabhesi zvinoenderana nebhizinesi rako kana zvido zvemunhu.
Tsvaga data, batanidza nayo, uenzanise, uongorore, uye fungidzira kunzwisisa.
Bata uye ronga zvinyorwa pazvinhu zvako zvese.
Design mharidzo nyanzvi
Ita izwi uye vhidhiyo kufona, shandisa chat uye govera mafaera.
Gadzira tevera mabasa ako munzvimbo imwechete nehungwaru hunokubatsira kuunganidza, kuisa pamberi uye kuita zvakawanda pamwe chete.
Ronga uye ugovane nguva dzemisangano, zviitiko uye uwane otomatiki zviziviso.
Cree ongororo, mibvunzo uye polls nyore uye ona mhedzisiro munguva chaiyo.
Bhizinesi giredhi email kuburikidza neyakazara uye yakajairika Outlook chiitiko
Dzivirira vana vako online ne zvemukati mafirita uye skrini nguva miganho, uyezve ramba wakabatana munyika chaiyo nekugovana nzvimbo.
Gadzira uye ugovane mishumo yekudyidzana, mharidzo uye nyaya dzomunhu oga.
ratidza yako kunyora unyanzvi.
Ronga iyo ruzivo rwekusvirana kubva kushamwari dzako dzese, mhuri, vaunoshanda navo uye vaunoziva.
Chengetedza yako mafaira munzvimbo imwe zviwane uye ugovane nazvo.
Cree workflows pakati pemaapplication, mafaera, uye data kuita otomatiki mabasa anotora nguva.
gadzira chero chinhu, kubva kune zvinyorwa kusvika kune zvinyorwa zvemashoko uye zvekutengesa zvinhu.
call, chat uye ita zvirongwa nemhuri uye neshamwari.
Microsoft 365 shanduro
Microsoft 365 Yemunhu
Iyi ndiyo rezinesi rakachipa Pane izvo zvinopihwa neMicrosoft 365, zvinotengeswa pa69 euros pagore uye zvinogona kungoshandiswa nemushandisi mumwechete uye inosanganisira 1 TB yekuchengetedza OneDrive.
Kunyoreswa uku zvakare Inotibvumira kushandisa ese maapplication mune yavo mobile vhezheni.
Microsoft 365 Mhuri
Iyi ndiyo mhinduro yakanakira mhuri dze vanosvika zviuru gumi. Inosanganisira 1TB yenhengo yemhuri yega yega kuburikidza neOneDrive. Kunyoreswa uku kunotengeswa pa99 euros pagore.
Kunyoresa uku kunotitenderawo shandisa ese maapplication mune yavo mobile version.
Zvirongwa zvemakambani zvinotipa zvakafanana zvatinogona kuwana mukunyoreswa Microsoft 365 Yemunhu kuwedzera mashandiro matsva (mune hwaro, akajairwa uye premium zvirongwa) izvo zvinongowanikwa kune bhizinesi nharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Windows News » Operating Systems » Windows 10 » Misiyano pakati peWindows neHofisi Sei zvisina kufanana?
Zvekuita kana Windows Update isiri kushanda
Windows inogona kuiswa paMac ine M1 processor?